Ny Teny Malagasy : Fanentanana ny Fon’ny Vahoaka amin’ny Fampandrosoana (Tapany II) – Blaogin'i Voniary
« Misaotra anareo, lehiretsy, namaly ny antso nataonay. Isika izao mantsy no fody niara-nitsindroka sy akanga niara-nanjohy, ka tonga amin’ilay hoe : tsindranolahy an-keniheny, ka ny tama-miray ihany no miaraka. »
Manana tsirin-kevitra sy vinavina ho enti-mampandroso ity faritra misy antsika ity izahay, satria tsy azo jerem-potsiny ny tany nahabe ary tsy azo atao tazan-davitra ny fanasoavan-tanindrazana. Izao izy izao no fahavoazany, izao izy izao no fahantrany , ka dia hanao tahaka an’Ikaladala eo ambody tenona ve isika, ka sady tsy hanohy ny tapaka no tsy hanentina ny madilana ? Ny adidy koa tsy an’olon-dratsy, ka dia nentinay eto izany hatao loa-bary an-dasy, satria ny hevitry ny maro no mahataka-davitra. Ilàna firaisan-kina izy io ka iantsoana antsika rehetra, satria izay tsy mahay sobika, mahay fatam-bary. Ireny nozaraina tamintsika ireny ny drafitra sy vinavina hotanterahina, ka aoka tsy hifampisorona na hijery arina an-tava. Tsy hoe « tian-kano, tsy tian-kano » koa izy io, fa mahazo milaza ny heviny avy izay manan-kolazaina, fa tsy tongobolo tsy akory isika ka hotampenam-bava. Tsy mety koa, anefa, ny manilika ny adidy amin’olom-bitsy, nefa samy hioty ny vokatra ihany avy eo. Ireny ilay antsoin’ny razana hoe : « sady tsy hitery omby no tsy hihazon-janakomby fa mitady hisodika ny herotra fotsiny », na hanao tahaka ny « angady ka ny zarany mihoso-menaka sady mijoro, nefa ny lelany mihoso-potaka miady amin-tany. »
Manana antsika rehetra izao ho reharehany ity tany nahalatsahan’ny tavonintsika ity, ka dia hangetaheta ambony lakana ve, sa ho noana eo am-pototry ny sompitra ?
Koa saino lalina, saino marivo, fa isika izao no velona fanovan’ny maty, ary zanaka mpandova ny anaran-dray, ka tsy avelantsika ity tany ity raha tsy manana izay voninahiny, ary asandratra koa ny vahoakany hahita ny anjara-masoandrony. Sa tsy izay no izy, leiretsy ?
fampandrosoana, fanentanana malagasy, hainteny sy ohabolana, rado akademia malagasy, rado mpanoratra, teny malagasy
2 commentaires sur “Ny Teny Malagasy : Fanentanana ny Fon’ny Vahoaka amin’ny Fampandrosoana (Tapany II)”
Rasoamanana Tiana dit :
Ary dia hozaraiko mihitsy izy ity fa maro ireo malagasy tompon’andraikitra (isika rehetra) mila mitsakotsako dia miezaka miaina ny teny malagasy amin’ny andavanandro.
Izany tokoa e! Mankasitraka mizara e!